Vodafone TV biara Samsung's Smart TV, otu esi etinye ya | Akụkọ akụrụngwa
Vodafone TV bụ nke kachasị ọhụrụ iji sonyere katalọgụ ngwa Tizen OS, sistemụ arụmọrụ maka Samsung Smart TVs. Ugbu a, ị ga-enwe ike iwunye ya ma dịkwa mfe ịnụ ụtọ ọdịnaya niile nke onye na-ahụ maka ọdịyo gị nwere maka gị na-enweghị iji ngwaike ọzọ. Yabụ, Tizen OS na-aga n'ihu itinye onwe ya dịka otu n'ime ndị ọzọ kachasị mma maka ndị ọrụ ekele maka ụlọ ahịa ngwa ya nke ọma na arụmọrụ nke arụmọrụ ya.
Companylọ ọrụ South Korea kwupụtara taa na ndị ọrụ nke Smart TV ga-enwe ike ịwụnye ngwa Vodafone TV, ihe ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ka ewere na asọmpi dị ka Movistar + adịla ogologo oge. N'ụzọ dị otú a, Samsung mezue onyinye ya ma nwee ngwa niile nke ndị na-eweta telivishọn na Spain na-akwụ ụgwọ ka ndị ọrụ ya nwee ike ịnụ ụtọ ha site na telivishọn na-enweghị mkpa maka mgbakwunye ngwaike ma ọ bụ akụkụ nke na-akwụsị iwe iwe zuru oke site na Tebụl TV.
Na mgbakwunye na ndụ telivishọn, ọrụ na Samsung Smart TVs bụ ndị ahịa Vodafone TV ga-enwe ike ịnweta oge zuru oke nke usoro kachasị amasị ha, ọtụtụ puku fim nke ụdị niile na ọtụtụ katalọgụ nke ọdịnaya achọrọ dị ka ihe nkiri, usoro, akwụkwọ akụkọ, egwuregwu ma ọ bụ egwu.
Etu esi etinye Vodafone TV na Samsung
Cheta nke mbụ na Vodafone TV ga-adị na Samsung TV ọ bụla nwere Tizen OS na ụdị kachasị dị ugbu a, ya bụ, ọ ga-adaba na ihe niile Samsung Smart TV arụpụtara n'ime afọ 2017.
Tinye ụlọ ahịa ngwa Tizen OS Smart Hub na TV gị
Budata ngwa Vodafone TV
Banye na akaụntụ Vodafone gị
Ọ bụ ihe dị oké mkpa chọrọ na ị rụọ ọrụ na mbụ ọrụ Ngwaọrụ n'ime My Vodafone portal. Nke ahụ bụ otú mfe i nwere ike inwe Vodafone TV na gị Samsung TV na-enweghị mkpa mpụga ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Vodafone TV biara na Smart TV nke Samsung, otu esi etinye ya